नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउँछन् पुरूष वेश्या ? - Movies Trends
नेपालमा सक्रिय पुरुष वेश्यालयः कति कमाउँछन् पुरूष वेश्या ?
लवाई खवाई नै फरक छ । देख्दा हट्टाकट्टा पनि छन । कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री (नाम परिवर्तन)को गेटअप हो यो । शहरका पुरुष यौनकर्मी उनको सम्पर्कमा हप्तामा ४/५ जना महिला आउने गर्छन । उनीहरुसंग यौन सम्पर्क पनि हुने गर्छ । धेरैजसो पनि दोहोरीन्छन । अधिकांश महिला उनलाई खोज्दै आउछँहरु भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन् । अनलाइन बिबरणहरूमा अाधारित याे समाचार समाग्री अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
ऒठको बारे १५ रहस्य जान्नु होस्